Bajaajlayaasha: Canshuur bixiyaal dhiigoodda la baneystay | KEYDMEDIA ONLINE
MUQDISHO, Soomaaliya - Muqdisho waxaa ka howlgala in ka badan 50 kun oo bajaaj, kuwaasi oo si maalin leh ah uga shaqeeya magaalada, iyadoo dadka shacabka ay u riyaaqeen howshooda fududeysay isku socodka.
Bajaajyadan ayaa shaqo abuur u noqotay dhallinyaro Soomaaliyeed, kuwaasi oo ka baaqday iney dalka ka tahriibaan ama ku kacaan falal amniga wax u dhimaya.
Qarash ahaan waa kuwo dowladda soo geliya kumanaan doolar, mana jirto canshuur ku baaqata bil walba, waxayna u bixiyaan sida loogu jideeyey.
Abaal-gudkii ay ka sugayeen DFS, ayaa loogu bedalay in dhiigoodu uu daadiyo askari mushaar laga siiyo lacagta ay canshuur ahaanta u bixiyaan.
21-kii bishan, askari ka tirsan ciidanka dowladda federaalka, ayaa degmada Hodon ee gobolka Banaadir ku diley wiil dhallinyaro ah oo kaxeynayey mooto bajaaj.
Wiilkan ayaa lahaa Labo xaas iyo Caruur, isaga oo nolosha qoysaskan ka debari jiray mooto bajaajta.
Akarigii dilka geystay ayaa si aan cabsi lahayn goobta isaga baxsaday, mana jirto cid dowladda ah oo arrintaasi wax iska weydiisay.
In ka badan 20 ruux oo dhallinyaro ah, kana shaqeynayey kaxeynta mooto bajaaj, ayaa 16-kii bil ee lasoo dhaafay lagu dilay magaalada Muqdisho.
Badi dhallinyaradan ma aanay helin wax cadaalad ah, oo dowladda federaalka waxay kasii jeesatay maxkamadeynta askartii wax dishay.
Dhanka kale, askarta wax disha ee baxsada ayaa gambaad ka dhigta guryaha ay deggan yihiin mas'uuliyiin DFS ka tirsan, kuwaasi oo xabadka u dhigta marka la isku dayo in lasoo qabto.
C/naasir Maxamed Cumar oo ah walaalka Nuur Maxamed oo bajaajle ahaa, balse la diley ayaa sheegay in muddo markii ay cadaaladda daba socdeen, waxna loo qaban waaye ay iska aamuseen.
Boqolaal qof ayaa cadaalad daridda ka jira Muqdisho waxay ku kalliftay in gabi ahaamba dalka isaga tagaan, maadaama uu iska mushaaxayo kii dhibka u geystay.
Haddii dhallinyarada shaqo abuurka ka waayey DFS, ay iskood shaqo u abuurteen, canshuurtana bixiyaan, dil loogu daro maxaa dalkan laga filan karaa?